Ahoana ny fametrahana Gitlab ao amin'ny mpizara amin'ny Ubuntu | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana Gitlab ao amin'ny mpizara amin'ny Ubuntu
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia fantatray izany ny fividianana tampoka an'i GitHub avy amin'i Microsoft. Fividianana mampiady hevitra izay arovan'ny maro toa ny nahavita azy na nitsikera azy mafy toa ny fahatongavan'ny Free Software. Izaho manokana dia tsy mino na miaro ny iray amin'ireo toerana roa ireo saingy marina fa ny vaovao toy izany dia nahatonga ny mpamorona rindrambaiko maro handao ny serivisy Github ary hitady fomba hafa alefa tahaka an'i Github talohan'ny nividianany an'i Microsoft.
Betsaka ny tolotra lasa malaza, saingy ny ankamaroan'ny mpamorona dia misafidy ny hampiasa GitLab, safidy maimaim-poana azontsika apetraka amin'ny solo-saintsika amin'ny Ubuntu na amin'ny mpizara tsy miankina iray izay mampiasa Ubuntu ho toy ny rafitra miasa.
1 Inona ny GitLab?
2 Inona no ilaintsika hametrahana GitLab amin'ny mpizara Ubuntu?
3 Fametrahana GitLab
4 Fanamboarana Gitlab CE
5 Gitlab na GitHub iza no tsara kokoa?
Fa alohan'ny zavatra rehetra aloha, andao hojerentsika izay tena izy. Gitlab dia fanaraha-maso kinova rindrambaiko izay mampiasa teknolojia Git. Saingy tsy toy ny serivisy hafa, mampiditra fiasa hafa ankoatran'ny Git izy toy ny serivisy wiki sy ny rafitra fanaraha-maso bibikely. Nahazo fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny GPL ny zava-drehetra, saingy marina fa toy ny karazana rindrambaiko hafa toy ny WordPress na Github mihitsy, dia tsy misy afaka mampiasa Gitlab. Gitlab dia manana serivisy web izay manolotra karazana kaonty roa amin'ny mpanjifany: kaonty maimaimpoana miaraka amin'ny tahirim-bola maimaim-poana sy ampahibemaso ary kaonty karama na premium hafa mamela antsika hamorona toeram-pivarotana tsy miankina na ho an'ny daholobe.
Midika izany fa ny angon-drakitra rehetra ataonay dia alefa amin'ny lozisialy ivelantsika izay tsy ananantsika ny fifehezana azy, toa an'i Github. Fa Gitlab dia manana kinova nantsoina bebe kokoa Gitlab CE o Fanontana amin'ny fiaraha-monina izay mamela antsika hametraka sy hanana tontolo Gitlab ao amin'ny mpizara na solosaina miaraka amin'i Ubuntu, na dia ny tena azo ampiharina aza dia ny fampiasana azy amin'ny mpizara miaraka amin'i Ubuntu. Manome antsika ny tombotsoan'ny Gitlab Premium ity rindrambaiko ity fa tsy mila mandoa na inona na inona amin'izany, satria apetrakay amin'ny mpizara anay ny rindrambaiko rehetra fa tsy amin'ny mpizara hafa.
Gitlab, toy ny serivisy Github, dia manolotra loharano mahaliana toy ny fananganana cloning, fananganana pejin-tranonkala miorina amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Jekyll na fifehezana kinova ary kaody izay ahafahantsika mampahafantatra raha misy hadisoana na tsia ilay rindrambaiko na ny fanitsiana.
Ny herin'i Gitlab dia ambony noho i Github, farafaharatsiny amin'ny lafiny serivisy, raha ampiasaintsika ho toy ny lozisialy mpizara anay izany dia miankina amin'ny fitaovan'ny mpizara anay ny heriny. Misy zavatra tsy maintsy raisina raha ny hataontsika dia ny manova ny rindrambaiko Github ho an'ny rindranasa Gitlab ao amin'ny mpizara tsy miankina aminay.
Inona no ilaintsika hametrahana GitLab amin'ny mpizara Ubuntu?
Ny fananana Gitlab na Gitlab CE amin'ny mpizara anay, aloha mila mametraka ny fiankinan-doha na rindrambaiko ilaina izahay mba hiasan'ny rindrambaiko tsara. Mba hanaovana izany dia manokatra terminal izahay ary manoratra ireto manaraka ireto:
Angamba fonosana toy ny curl dia efa eo amin'ny solosaintsika fa raha tsy izany dia fotoana tsara apetraka.
Ankehitriny manana ny fiankinan-doha Gitlab rehetra isika, Tokony hametraka ny rindrambaiko Gitlab CE isika, izay ampahibemaso ary azontsika atao amin'ny alàlan'ny tahiry ivelany mankany Ubuntu. Mba hanaovana izany dia manokatra terminal izahay ary manoratra ireto manaraka ireto:
Misy fomba iray hafa izay misy ny fampiasana repository ivelany fa miaraka amin'ny fitaovana rindrambaiko Apt-get. Mba hanaovana izany, raha tokony hanoratra ireo voalaza etsy ambony ao amin'ny terminal isika dia tsy maintsy manoratra ireto manaraka ireto:
Ary amin'izany dia hananantsika ny lozisialy Gitlab CE amin'ny mpizara Ubuntu. Fotoana izao hanaovana fanaovan-javatra ifotony mba hiasa tsara.
Fanamboarana Gitlab CE
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia mamoaka seranana sasany ampiasain'i Gitlab ary hakatona izy ireo ary mampiasa rindrina firewall izahay. Ny seranana izay tokony hosokafantsika na ampiasain'i Gitlab no seranana 80 sy 443.
Ankehitriny, mila manokatra ny efijery Gitlab CE voalohany isika, noho izany dia manokatra ny pejin-tranonkala http://gitlabce.example.com ao amin'ny tranokalanay. Ity pejy ity dia ho an'ny mpizara anay, saingy amin'ny fotoana voalohany dia mila ovay ny teny miafina izay ananan'ny rafitra amin'ny alàlan'ny default. Rehefa avy nanova ny teny miafinao isika dia tsy maintsy misoratra anarana na midira miaraka amin'ny tenimiafinao vaovao sy ny mpampiasa "root". Amin'izany isika dia hanana ny faritra fikirakirana manokana an'ny rafitra Gitlab ao amin'ny mpizara Ubuntu.
Raha hampiasain'ny besinimaro ny mpizara anay dia azo antoka fa mila mampiasa ny https protokolota izahay, protokol iray web izay mampiasa mari-pankasitrahana mba hahatonga ny fitetezana tranonkala ho azo antoka kokoa. Azontsika atao ny mampiasa taratasy fanamarinana rehetra fa ny Gitlab CE dia tsy manova ny url amin'ny toerana fitahirizana azy, raha te hanana an'io dia mila ataontsika amin'ny tanana, noho izany dia manitsy ny rakitra /etc/gitlab/gitlab.rb izahay ary amin'ny ivelany_URL dia tsy maintsy manova ny adiresy taloha ho an'ilay vaovao isikaAmin'ity tranga ity dia hanampy ny litera "s" izy, fa azontsika atao ihany koa ny manavaka ny url ary mampitombo ny fiarovana ny mpizara tranonkala. Raha vao manangona sy manidy ny fisie isika dia tsy maintsy manoratra ity manaraka ity ao amin'ny terminal mba ho ekena ny fanovana natao:
Hahatonga ny fiovana rehetra ataontsika amin'ny lozisialy Gitlab izany ary ho vonona ho an'ireo mpampiasa an'ity rafitra fanaraha-maso kinova ity. Ankehitriny isika dia afaka mampiasa ity rindrambaiko ity tsy misy olana ary tsy mandoa na inona na inona hanana trano fitahirizana manokana.
Gitlab na GitHub iza no tsara kokoa?
Amin'ity fotoana ity, azo antoka fa maro aminareo no hanontany tena hoe inona ny rindrambaiko tsara ampiasaina na mamorona repositories an'ny rindrambaiko. Na hanohy amin'ny Github na raha hiova ho Gitlab. Samy mampiasa Git izy ireo ary azo ovaina na afindra mora foana ny rindrambaiko noforonina avy amin'ny tahiry iray mankany amin'ny iray hafa. Fa manokana Manoro hevitra anao aho ny hanohy hiaraka amin'i Github raha manana izany amin'ny mpizara anay ary raha tsy manana zavatra napetraka isika, dia apetraho ny Gitlab. Ny anton'izany dia satria mieritreritra aho fa ny famokarana dia ambonin'izany rehetra izany, ary ny fanovana rindrambaiko iray ho an'ny iray hafa izay kely dia kely ny tombony azony dia tsy manonitra.
Ny zavatra tsara momba azy dia ireo rindrambaiko roa ireo Free Software ary raha fantatsika mamorona milina virtoaly, azontsika atao ny mizaha ny programa roa ary mahita hoe iza no mety amintsika nefa tsy manova na manimba ny mpizara Ubuntu.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fametrahana Gitlab ao amin'ny mpizara amin'ny Ubuntu
Edgar Albalate Ibanez dia hoy izy:
Mampiasa safidy hafa antsoina hoe gitea aho. https://github.com/go-gitea/. Azonao atao ny manandrana azy amin'ny https://gitea.io
Valiny tamin'i Edgar Albalate Ibañez
wilburnmosum dia hoy izy:
misoratra anarana alt.com
Mamaly an'i Wilburnmosum
justindam dia hoy izy:
Ny lalao dinôzôro https://dinosaurgames.org.uk/ manolora fahafinaretana miaraka amin'ireo biby efa an-tapitrisany taona lasa izay! Azonao atao ny mitantana neanderthal sy karazana dinosa rehetra; Tyrannosaurus Rex, Velociraptors, ary koa Brachiosaurus dia samy ao anatiny avokoa! Ny haavon'ny dinôzôro dia mirakitra karazana filalaovana isan-karazany, manomboka amin'ny ady ka hatramin'ny traikefa hatramin'ny poker amin'ny Internet. Azonao atao ny milalao karazana sakana rehetra tadiavinao, manome anao fialamboly prehistorika mandritra ny ora maromaro! Miadia amin'ny maha-olona lava-bato mifanohitra amin'ny zavaboary, mivezivezy amin'ny tany ary mihinana ny fahavalonao koa!
Mamaly an'i Justindam
LelandHoR dia hoy izy:
Egger First Person voalohany miorina amin'ny tranonkala! Mahazo mamaky! Safidio ny kilasinao ary atsaharo ihany koa ny fahavalonao amin'ny fitongilanana atody amin'ity shooter multplayer 3d ity. Mampiasà fitaovana mahafaty toy ny Scramble Shotgun ary koa EggK47 rehefa manatona ny fandresena ianao. Ankasitraho ireo sifotra nesorina https://shellshockersunblocked.space/
Mamaly an'i LelandHoR
VR180 Mpamorona, google dia mitady hanamorana ny fanovana ny horonantsary VR amin'ny Gnu / Linux